Koox ka qaatayaal ah oo lagu xukumay xukunno kala duwan | Shabakadda Garsoor
Home Maxkamadda Ciidanka Maxkamadda Darajada Kowaad ee CQS Koox ka qaatayaal ah oo lagu xukumay xukunno kala duwan
Muqdisho-Garsoor- Maxamed Cabduqaadir Maxamed Cumar, Cabdikaafi Cabdi Jaamac Warsame iyo Cabbdirisaaq Maxamed Abshir Kheyre ayaa loo heystaa in ay yihiin koox ka qaatayaal ah oo loola jeedo koox dhac ku geysata Bistoolado iyaga oo isticmaalaya Bajaaj, waxa ayna dilaan qofkii isku dhajiya agabka ay xilligaas ka dhacayaan side Teleefoonada iyo Kombiitarrada.
23-kii August Sanadkii tegay ayay weerar furasha ah ku qaadeen Askari ka tirsan ciidamada sida gaarka ah u tababaran oo xilligaas ka yimid Jaamacad, waxa uuna maareeyay isku daygoodii isaga oo ay u suura gashay in uu dhaawaco mid kamid ah kooxdan ka qaatayaasha halka kuwa kalane ay ka baxsadeen xilligaasi balse mar dambe oo ay dabagal ku sameeyaan hey’adaha Amniga ay soo qabteen Sedaxda eedeysane bishii sagaalaad ee sanadkaas.
Hey’adaha baarista ciidamada amniga ayaa ka gutay waajibaadkooda Baariseed, waxa ayna Xafiiska Xeer ilaalinta ku soo wareejiyeen kiiska Sedaxda eedeysane.
Xafiiska oo ka duulayo waajibkiisa baaris iyo kiisa horgeynta Maxkamadeed ayaa weydiistay Garsoorsayaasha in eedeysanayaasha loo gudbiyo Xabsiga Dhexe garsug ahaan 25-kii November sanadkii ina dhaafay.
Baaris dheer kadib Xafiiska Xeer Ilaalinta ayaa codsaday in la muddeeyo 18-kii January ee sanadkan dhageysiga dacwad ka dhan ah Maxamed Cabdullaahi Maxamed Cumar, Cabdikaafi Cabdi Jaamac Warsame iyo Cabbdirisaaq Maxamed Abshir Kheyre, waxa ayna Maxkamadda ogolaatay dalabka xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sedaxda bishan aynu ku jirno.
Sedaxda eedeysane ayaa mid kastaahi fursad loo siiyay in ay ka jawaabaan eedda ay u jeedisay Maxkamadda oo ay horey u soo diyaariyeen Xafiiska Xeer Ilaalinta ciidamada qalabka Sida.
Eedeysanaha koowaad Maxamed Cabbduqaadir Maxamed Cumar Xalane ayaa u sheegay garsoorayaasha in uu bixiyay laba dollar oo mid kamid ah labada eedeysane weydiistay kaasi oo ayaqoon hore ka dhaxeysay balse aysan jirin wax fal dambi ah oo uu kala qeyb qaatay labada eedeysane.
Cabdikaafi Cabdi Jaamac Warsame oo ah eedeysannaha labaad, sidoo kalane ahaa eedeysanaha isku dayay in uu dilo Askariga maraya xaafadda taleex ee degmada Hodan ayaa Maxkamadda u sheegay in uu jiro shaqsi kale oo isna kamid ah kooxdan oo xilligaasi kula jiray howlaha Burcadnimada ah, waxa uu sheegay in uu ku hubeysnaa Bistoolad Taate ah sidoo kale hadda ka hor saldhiga degmada Wadajir loogu xiray tuuganim.
Eedeysanaha Sedaxaad Cabdirisaaq Maxamed Abshir Kheyre ayaa ahaa milkiilaha mootada, waxa uuna u dhiibi jiray sida uu qirtay eedeysanaha labaad mana jirin wax kale oo xiriir ah oo ka dhexeeyay marka laga yimaado in ay is fahansayeen sida uu u sheegay Garsoorayaasha.
Xafiiska ayaa Maxkamadda weydiistay in lagu xukumo ciqaab u dhiganta qodobbada ay ku soo eedeeyeen Sedaxda eedeysane oo dhaqan ahaa shabahaa kuwa wax dhagra ee ka tirsan Argagixisada.
Qareennada u dooday eedeysanayaasha ayaa Maxkamadda weydiistay in la siiyo xurriyadiisa eedeysanaha koowaad oo ay xafiiska xeer ilaalinta ku waayeen wax dambi ah marka laga reebo in uu caawiyay yar saaxiibkiis ah halka labada kale uu codsaday in loo fiiriyo qodobbada dambiga fududeeyo.
Garsoorayaasha oo ka baaran degaya nuxurka dacwada iyo mugga kiiska ayaa ugu dambeyn go’aan ku gaaray in Maxamed Cabduqaadir Maxamed Cumar la siiyo xurriyadiisa hadii uusan jirin dambi kale halka Cabdikaafi Cabdi Jaamac Warsame lagu xukumay 8-sano oo xabsi ciidan ah, sidoo kale Maxkamadda ayaa ku xukuntay Cabbdirisaaq Maxamed Abshir Kheyre 5-sano oo xabsi ciidan ah, sida uu u sheegay dhinacyada dacwadda Gaashaanle Sare xasan Cali Nuur Shuute guddoomiyaha Maxkamadda Darajada Koowaad ee ciidamada qalabka sida.
Xukunsayaasha ayaa heysta fursad ay ku dalban karaan Rafcaab muddo ku siman 30-cisho xukunka kadib.
Previous articleKoox ka qaatayaal ah oo lagu xukumay xukunno kala duwan